Saka iwe unogona kutevera kuratidzwa kweiyo iPhone 7 kurarama | IPhone nhau
Maitiro ekuona chiitiko chemasikati ichi Apple rarama
Tiri pasi pemaawa maviri kure kuti chii chichava chiitiko chegore cheApple. Iyo iPhones nyowani inogara ichigadzira tarisiro huru uye, zvingaite sei neimwe nzira, iyo kambani inoda kuita kuti zvive nyore kune wese munhu kuti anakirwe nekuratidzwa kwavo mireza mitsva inorarama. Nenzira imwecheteyo seapo pazviitiko zvakapfuura, Ivo vanozogonesa nzvimbo pawebhusaiti yavo kubva kwatinogona kutevera iyo kumhanyira mukuru wechiitiko.
Zvisinei, zvishoma zvinodiwa zvinodiwas kuti tikwanise kuona kuyerera kubva kuchinhu chedu. Usatombo kunetseka, nekuti chinhu chakachengeteka kwazvo ndechekuti iwe unozviteerera. Nekudaro, isu tinokurudzira kuti iwe uzvitarise izvozvi kuti udzivise zvingagumbura padhuze nenguva yekutanga yehurukuro
Kuti uteedzere nemazvo kurarama kunoitwa kubva kuSan Francisco, unofanirwa kupinda dandemutande iri panguva yekuratidzira uye zviite kubva:
Safari pane iPhone, iPad kana iPod Kubata neIOS 7.0 kana kupfuura.
Safari 6.0.5 kana yakakwira paMac ine OS X 10.8.5 kana kupfuura.
Microsoft Edge pane Windows 10 PC.
Chizvarwa chechipiri kana chechitatu Apple TV ine vhezheni 2 kana yepamusoro kana Apple TV 3.
Kana iwe ukasangana nezvose izvi zvinodiwa, iwe unofanirwa kungozorora kusvika panguva yakatarwa uye ... kunakirwa! Asi, pamwe nguva yasvika yekugadzirisa chishandiso chako kana kumhanyira kumba kweshamwari yako kuti usarasikirwe nezvose Tim Cook nekambani zvavanofanira kutiudza nhasi nezve izvo zvitsva kukambani iri pablock.
Tinokuyeuchidza izvozvo kubva kuActualidad iPhone isu tichapa zvakakwana kufukidzwa kwechiitiko chacho, saka isu takamirira iwe munhepfenyuro yedu yepamhepo kuti utaure pane zvese zvinoitika muimba yeBill Graham.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Maitiro ekuona chiitiko chemasikati ichi Apple rarama
Ndakagadzirira kuona chiitiko ichi
Izvo hazvisati zvatanga kana chii?
Ini ndinopinda peji uye hapana
Apple inosunga iyo paTwitter: yakafumura iyo nhema uye isina mvura iPhone 7
Apple iri kutsvaga chip chip kuti ibhadhare iyo iPhone nekunyorwa